A na-ekpe Google ikpe maka ịnakọta data na nzuzo na ndị ọrụ gam akporo | Site na Linux
Dị ka aha ya na-ekwu a ọhụrụ ikpe megide Mountain View, ụlọ ọrụ California. Na Tọzdee, Nọvemba 12, 2020, Joseph Taylor, Edward Mlakar, Mick Cleary na Eugene Alvis, n’ezie, gbara akwụkwọ n’ụlọ ikpe United States District nke San José, na-ebo ebubo Google iji zuo ihe ọmụma nke ndị ọrụ gam akporo site na nnyefe zoro ezo na nke a na-apụghị ịdabere na ya na sava ha.
Dabere na mkpesa ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-eji aghụghọ eme ihe ntinye data nke ndị ọrụ gam akporo iji zipu ozi gbasara ha.
O kwesịkwara iburu n’uche na Google mere gam akporo sistemụ iji nakọta ọtụtụ ozi gbasara ndị ọrụ. N'ụzọ dị otú a, ị na-ewepụta ọtụtụ ijeri uru kwa afọ mgbe ị na-ere mgbasa ozi dijitalụ ezubere iche. Mana iji mee nke a, nnukwu ụlọ ọrụ weebụ ga-enwetakwa ihe onwunwe nke ndị ọrụ a n'ụzọ na-akwadoghị, gụnyere data ekwentị ha.
“N’ezie, Google na-amanye ndị ọrụ a ka ha kwado onyunyo ya site na itinye mmemme gam akporo ngwaọrụ iji na-ebufe ozi onye ọrụ na Google oge niile, si otú a na-etinye data ekwentị bara uru ndị ọrụ zụtara. Google na-eme nke a, n'ọtụtụ dị ukwuu, maka uru ego ya, na-agwaghị ndị ọrụ ma ọ bụ jụọ maka nkwenye ha, "mkpesa ahụ gụrụ.
Nzuzo nzuzo a ọ naghị arụtụ aka na data zigara Wi-Fi.
Ebe ọ bụ mkpesa na-egosi ikpe ebe ọ metụtara data ezigara site na njikọ mkpanaka na enweghị Wi-Fi ma ọ bụrụ na onye ọrụ gam akporo ahọrọ usoro ihe omume ejikọtara na netwọk.
N'ezie, ndị nkụkọ na-echegbu onwe ha gbasara data ezigara na sava Google n'ihi na ọ bụghị nsonaazụ nke akpachapụ anya na ekwentị mkpanaaka.
“Google haziri ma tinye usoro sistemụ gam akporo ya na ngwa iji wepụta ma zipu nnukwu ozi n'etiti ngwaọrụ mkpanaka nke ndị na-eme mkpesa na Google na-eji data data mkpesa. Ntugharị Google nke ndị na-ekwu ihe gbasara data mkpanaka site na nnyefe na-apụta na ndabere, abụghị nsonaazụ nke ndị na-azọrọ ihe na ngwa Google na akụrụngwa na ngwaọrụ ha, na-eme na-enweghị nkwenye. nke ndị na-eme mkpesa, ”ka mkpesa ahụ na-ekwu.
A na-enyefe data ndị a na-agafe agafe n'ụzọ atọ dị iche iche.
Nke mbụ na-apụta mgbe ngwaọrụ mkpanaka nọ n'ọnọdụ ụra zuru ezu (a na-emechi ngwa niile).
Nke abụọ, nke na-enyefe olu ka ukwuu, na-eme mgbe a na-adọba ngwaọrụ mkpanaka ma na-emebibeghị, mana otu ma ọ bụ karịa ngwa mepere emepe na anaghị eji ya.
Nke atọ, nke na-ebufe ọbụna data ndị ọzọ, na-eme mgbe ndị ọrụ jiri gam akporo ha, na-emekọrịta ihe, na-eleta ibe weebụ ma ọ bụ jiri ngwa.
Na nkwenye nke ebubo ndị a, nyocha nke ndị ọka iwu na-ekpe ikpe nyere ya duziri ule na ngwaọrụ ohuru Samsung Galaxy S7 mgbe ị na-ahazi ntọala ndabara ntọala.
Kọmputa jikọọ na akaụntụ ọhụrụ Google ma jikọọ na Wi-Fi. Ihe nlele ahụ gosipụtara nke ahụ ngwaọrụ a, nke nọ n’ọnọdụ ụra, “na-ezipụ ma na-anata 8.88MB kwa ụbọchị nke data na 94% nke nkwukọrịta ndị a dị n'etiti Google na ngwaọrụ ahụ.
Ekwentị, yana ngwa niile mechiri, zigara ozi na Google ihe dịka oge 16 kwa elekere, nke yiri oge 389 na 24 awa.
Ọkachamara Prọfesọ Douglas C. Schmidt nyochara nchikota data nke Google na 2018 chọpụtakwara na ngwaọrụ gam akporo na-agbanweta ozi na Google n'agbanyeghị ekwentị anaghị arụ ọrụ. Ekwuru na onye ọrụ ọgbara ọhụrụ na-ebugharị data dị ihe dị ka oge 900 na awa 24, nkezi nke 38 ugboro kwa elekere ma ọ bụrụ na ngwa Chrome mepere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » A na-ekpe Google ikpe maka ịnakọta data na nzuzo site na ndị ọrụ gam akporo
Ajụjụ bụ ... Ọ bụ ihe na-amasịkarị ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ? Ọ nwere ezigbo ụzọ ọzọ nke anaghị eziga oke data sitere na ekwentị anyị?
Ugbu a, dị ka ezigbo ọzọ, enwere naanị / e / OS, n'ihi na enwere Lineage Os, mana echere m na ha anaghị ewepụ akụkụ nke ahịhịa ahịhịa gam akporo nwere, nke jikọtara na sava Google.
uzo ozo: ekwenti ma obu librem5
Zaghachi na nonamed@hotmail.com
O ziri ezi, n'agbanyeghị na m ka na-eche onye nkesa ebe a n'obodo m, n'ihi na ọ tụkwasịghị kọstọm ma ọ bụ usoro izi ozi obi ...
Equinox Desktop Environment (EDE): DE pere pere mpe na ngwa ngwa maka Linux